Lapho uphakathi nendawo emkhathini
Igama elithi "yonke" kuzwakele kubo bonke kusukela ingane isencane. Yilokho esahlangabezana khumbula, lapho ngiphakamisela ikhanda lami, ngomoya bated, ukubheka isibhakabhaka enkulu inenqwaba yezinkanyezi Sparks. Thina sizibuze: "Indlela umkhathi wethu engaphelele? Ingabe unayo imingcele ethize kwendawo, ekugcineni, kungenzeka ukuthola indawo lapho nendawo emkhathini? "
Leli gama uyiswa zimelela yonke ezihlukahlukene izinkanyezi kungabonwa hhayi kuphela ngokubona okubonakala ngeso lenyama, kodwa ngosizo kumadivayisi we-optical, ezifana isibonakude. Kuhlanganisa imithala eminingi. Njengoba singeke kodwa ukubona yonke ngokuphelele, futhi imingcele yayo azitholakali emehlweni ethu. Kungenzeka ukuthi ngokuphelele elingapheli. Libuye nzima ukuthola ukuthi ngokuqinisekile ezakheke ngayo. Ngokuvamile linikezwa ngesimo idiski, kodwa kungase kahle abe eyindilinga, futhi okweqanda. Futhi kuvela aphikisane kancane emhlabeni umbuzo lapho uphakathi nendawo emkhathini.
Kunemibono ehlukahlukene ukuchaza lo mqondo. Ngakho, singakhumbula ukuthi imfundiso yokuziphendukela kwezinto Einstein: Ngokusho lokhu nendawo emkhathini angabhekwa iliphi iphuzu ngenhlonipho lapho izilinganiso zenziwa. Kuyo yonke le minyaka ehlweni lomuntu uye washintsha enkulu inkinga. It kwakucatshangwa ukuthi kwakuyizwi Zomhlaba - maphakathi nendawo yonke kanye nendlela yonke. Ngokusho basendulo, okwaba yiso ukuthi umumo flat nokwakhela izindlovu ezine okuyinto yena, ukujama ufudu. Kamuva yaphinde yamukelwa imodeli heliocentric lapho isikhungo zendawo yonke ziwubufakazi elangeni. Futhi kuphela ke, lapho ososayensi beqaphela ukuthi lo muntu Sun nje omunye ngangezinkanyezi zezulu, nemibono hhayi elikhulu kakhulu maphakathi nomhlaba kwaba asikhumbuza lokho esinakho namhlanje.
Umqondo we nendawo emkhathini imfundiso Big Bang
Okubizwa ngokuthi "Big Bang Theory" siphakamisiwe kulo emphakathini yezinkanyezi noFred Hoyle - physics eyaziwa - njengoba kuchazwa ngemvelaphi yezulu nomhlaba. Kuze kube manje, kuba mhlawumbe ethandwa kakhulu kumibuthano ahlukahlukene. Ngokwalo mbono, isikhala ukuthi manje usesikhundleni umkhathi wethu kwaba umphumela ngokushesha kakhulu, kepha efaniswe ukuqhuma, ukunwetshwa ivolumu azinakwa kokuqala. Ngakolunye uhlangothi, yonke imibono yomuntu, umfuziselo ezinjalo akufanele kuphela abe nemingcele kahle ichazwe, kodwa futhi maphakathi, esemgwaqweni endaweni eya kuyo, eqinisweni, ukunwebeka waqala. Kodwa lapho le ndaba ukuthi abantu abahlala elinganiselwe isikhala ezintathu-ntathu, kumane nje akunakwenzeka ukuba sicabange. Futhi iphuzu okuyinto isikhungo yezinkanyezi isikhala, kungenziwa etholakala omunye, ifike kithi nesilinganiso.
Telescope "Hubble" cwaningo
Okusanda kwabezindaba kwakukhona imibiko ukuthi isibonakude emkhathini "Hubble" wenzé uchungechunge izithombe yomkhathi wethu ekujuleni kwenhliziyo. Futhi idolobha satholakala nendawo emkhathini, kusukela lapho umlandeli run up galaxy. hhayi wuhlole ngokuningiliziwe okwamanje kungenzeka, ngoba itholakala ikude kakhulu.
Nomaphi lapho kwakunabantu abaningi iphuzu isikhungo yezinkanyezi yomkhathi wethu, singazi abakwazi kuphela ukuwufinyelela, kodwa ngisho nje ukubona.
Park - indawo uphumule futhi hhayi kuphela. Amapaki ubhedu emhlabeni